Ngikhulume amazwi amaningi, futhi ngiyishilo intando Yami nesimo Sami, kodwa noma kunjalo, abantu abakakwazi ukungazi nokukholelwa Kimi. Noma kungathiwa abakakwazi ukungilalela. Labo abaphila eBhayibhelini, labo abaphila ngaphansi kwemithetho, labo abaphila esiphambanweni, labo abaphila ngezimfundiso, labo abaphila emsebenzini engiwenzayo namuhla—ibaphi phakathi kwabo abafanelana Nami? Ucabanga kuphela ukuthola izibusiso nemiklomelo, awukaze ucabange ngokuthi ungafanelana kanjani Nami, noma ucabange ngokuthi ungazivikela kanjani ukuthi ungabi yisitha Sami. Ngiphoxeke kakhulu ngawe, ngoba ngikunikeze okuningi kodwa ngizuze okuncanyana kuwena. Ukukhohlisa kwakho, ukuzidla kwakho, umhobholo wakho, izifiso zakho ezinkulu, ukungathembeki kwakho, ukungalaleli kwakho—yikhuphi kulokhu engingekubone? Ukumbandaza kwakho Kimi, ungenza isiwula, uyangethuka, uyangikhohlisa, ungithwalisa ubunzima, ungiphanga imihlatshelo—kungenzeka kanjani ukuthi lokhu okulimaza kangaka kuphunyuke ekujeziseni Kwami? Ukwenza kwakho ububi kuwubufakazi bobutha bakho Kimi, nokungafanelani Nami. Omunye nomunye wenu ukholelwa ukuthi ufanelana kahle Nami, kodwa uma ngabe kunjalo, manje lobu bufakazi obungephikiswe busebenza kubani? Nikholwa ukuthi niqotho futhi nithembeke kakhulu Kimi. Nicabanga ukuthi nilunge kakhulu, ninozwela, futhi nizinikele kakhulu Kimi. Nicabanga ukuthi ningenzele okwanele. Kodwa nike naqhathanisa lezi zinkolelo nokuziphatha kwenu? Ngithi niyazidla kakhulu, nigcwele umhobolo, nibudedengu kakhulu, amaqhinga eningikhohlisa ngawo anobuqili, kanti ninezinhloso nezindlela eziyihlazo eziningi. Ukuthembeka kwenu kuncane, ubuqotho benu abunamsebenzi, kanti unembeza wenu wona untula kakhulu. Kunobubi obuningi ezinhliziyweni zenu, futhi akekho osindayo ebubini benu, ngisho Nami uqobo. Ningivalela ngaphandle ngenxa yezingane zenu, noma abayeni benu, noma ukuze nizigcine nina. Kunokuthi ningikhathalele, nikhathalela imindeni yenu, izingane zenu, izikhundla zenu, ikusasa lenu nokwaneliseka kwenu. Nike nangicabanga nini ezinkulumweni nasezenzweni zenu? Uma kubanda, imicabango yenu iya ezinganeni zenu, kubayeni benu, kumakhosikazi enu nabazali benu. Uma kushisa, angikho nokuba khona emicabangweni yenu futhi. Uma wenza umsebenzi wakho, ucabanga ngezinto ezithandwa nguwe, ukuphepha kwakho, kwamalungu omndeni wakho. Ungenzeleni Mina? Uke wacabanga nje Ngami? Uke wazinikela nini Kimi, nasemsebenzini Wami noma kukusiphi isimo? Bukuphi ubufakazi bakho bokufanelana Nami? Kukuphi ukuthembeka ngeqiniso kwakho Kimi? Liphi iqiniso lokwethembeka kwakho Kimi? Kunini lapho izinhloso zakho bekungezona nje zokuthi uthole izibusiso Zami? Ungenza isiwula ungikhohlisa, udlala ngeqiniso, ufihle ubukhona beqiniso, uthengise ngobukhona beqiniso. Uzibeka ebutheni obukhulu Nami, ngakho ikusasa likuphatheleni? Ufuna nje ukufanelana noNkulunkulu ongabonakali, ufune nje inkolo engekho, kodwa awufanelani noKristu. Ingabe inkohlakalo yakho angeke ithole ukuziphindiselela okufanele ababi? Ngaleso sikhathi, uzobona ukuthi akekho umuntu ongafanelani noKristu ongaphunyuka osukwini lolaka, futhi uzothola ukuthi nhloboni yokuziphindiselela ezoba phezu kwalaba abayizitha noKristu. Uma lufika lolo suku, amaphupho enu okubusiswa ngenxa yokukholelwa kwenu kuNkulunkulu, nawokungena ezulwini, azoshabalala. Kodwa-ke, akunjalo kulabo abafanelana noKristu. Yize belahlekelwe okuningi kangaka, yize bedlule ebunzimeni obukhulu, bazothola wonke amafa engizowanikeza abantu. Ekugcineni, uzoqonda ukuthi yimina kuphela uNkulunkulu olungile, kanti yimina ngedwa enginganika umuntu ikusasa elihle.
Okulandelayo：Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?